Khilaafkii Imaaraadka iyo Soomaaliya labo sano kadib maxaa iska bedelay ? | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Khilaafkii Imaaraadka iyo Soomaaliya labo sano kadib maxaa iska bedelay ?
Khilaafkii Imaaraadka iyo Soomaaliya labo sano kadib maxaa iska bedelay ?
Xil Fiqi oo si yaab leh oga hadlay xilka wasiirnimo oo Galmudug ka qabtay iyo go’aanka oo qaatay
Magaca iyo Sawirka askarigii xalay dilka ka geestay Muqdisho oo lasoo bandhigay
Banaanbax ka socda Muqdisho & Dac careysan oo isugu baxay+taayaro la gubayo
Dowladda Soomaaliya oo mamnuucday in salaadaha Cishaha iyo Taraawiixda lagu dukado masaajidada Muqdisho.
Xil Fiqi oo si yaab leh oga hadlay xilka wasiirnimo oo...
Magaca iyo Sawirka askarigii xalay dilka ka geestay Muqdisho oo lasoo...
Banaanbax ka socda Muqdisho & Dac careysan oo isugu baxay+taayaro la...